News - Ọrụ tụnyere nke servo moto na stepper moto
Dị ka usoro nchịkwa na-emeghe emeghe, stepper moto nwere mmekọrịta dị mkpa na teknụzụ njikwa dijitalụ nke oge a. Na ugbu a anụ ụlọ dijitalụ akara usoro, stepper moto ọtụtụ-eji. Na ọdịdị nke zuru dijitalụ AC servo usoro, AC servo moto na-na-ọzọ etinyere na dijitalụ akara usoro. Iji imeghari na mmepe omume nke dijitalụ akara, ọtụtụ n'ime ngagharị akara usoro ịmụta stepper moto ma ọ bụ zuru dijitalụ AC servo moto dị ka Executive moto. Ọ bụ ezie na ha yiri ọnọdụ njikwa (ụgbọ okporo ígwè na mgbaàmà ntụzịaka), ha dị ezigbo iche na arụmọrụ na ngwa. A na-atụle arụmọrụ nke abụọ.
Nke mbụ, Nchịkwa njikwa dị iche
Nzọụkwụ ụkwụ nke usoro ngwakọ ngwakọ nke abụọ bụ n'ozuzu 1.8 Celsius na 0.9 Celsius, na nkwụsị ụkwụ nke usoro ngwakọ ngwakọ nke ise n'ozuzu bụ n'ozuzu 0.72 Celsius na 0.36 Celsius. Enwekwara ụfọdụ igwe na-arụ ọrụ dị elu site na ịkekọrịta azụ azụ n'akụkụ ka ọ dị obere. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịtọọ akụkụ Angle nke ngwakọ ngwakọ ngwakọ abụọ nke NEWKYE rụpụtara na 1.8 Celsius, 0.9 Celsius, 0.72 Celsius, 0.36 Celsius, 0.18 Celsius, 0.09 Celsius, 0.072 Celsius na 0.036 Celsius site na igodo mgbanwe. dakọtara na nzọụkwụ n'akuku nke abụọ-adọ na ise-adọ ngwakọ n'itinyekwu moto.
The akara nkenke nke ac servo moto na-ekwe nkwa site rotary encoder na azụ na njedebe nke moto aro. Inweta NEWKYE zuru dijitalụ AC servo moto dị ka ihe atụ, maka moto nwere akara ngosi 2500 akara, ihe a na-akpọ pulse bụ 360 Celsius / 8000 = 0.045 Celsius n'ihi iji teknụzụ ugboro anọ dị n'ime onye ọkwọ ụgbọ ala. Maka moto nwere 17-bit encoder, onye ọkwọ ụgbọ ahụ na-anata 131072 usu Motors maka otu ntụgharị, ya bụ, ihe ya na ya bụ 360 Celsius / 131072 = 0.0027466 Celsius, nke bụ 1/655 nke ihe nkwụnye ọkụ a nzọụkwụ Angle nke 1.8 Celsius.
Nke abuo, njirimara nke obere ugboro dị iche iche
Na obere ọsọ, stepper moto na-adịkarị mfe vibration. Njirijijijiji metụtara ọnọdụ ibu na ịrụ ọrụ ọkwọ ụgbọ ala. A na-ewerekarị ya na oge ịma jijiji bụ ọkara nke ugboro anaghị ewepu moto. Ọdịdị ịma jijiji dị ala na-ekpebi site na ụkpụrụ ọrụ nke stepper moto dị ezigbo njọ na ọrụ igwe. Mgbe stepper moto na-arụ ọrụ na obere ọsọ, a na-ejikarị teknụzụ damping eme ihe n'ozuzu iji merie ihe ngosi nke obere ikuku vibration, dị ka ịgbakwunye mpempe akwụkwọ na moto, ma ọ bụ ọkwọ ụgbọ ala na iji teknụzụ nkewa.
Igwe oku AC na-agba ọsọ nke ọma ma ọ dịghị ama jijiji ọbụlagodi na obere ọsọ. Ọrụ servo na arụ ọrụ resonance suppression, nwere ike ikpuchi enweghị ike nke igwe, yana sistemụ ahụ nwere ọrụ nyocha ugboro ole (FFT), nwere ike ịchọpụta isi mmalite nke ịma jijiji, dị mfe ịhazigharị usoro ahụ.
Nke ato, oge njirimara oge dị iche
Mmepụta torque nke stepper moto mbelata na-abawanye nke ọsọ, na ga-ada sharply na a elu na-agba, otú ya kacha arụ ọrụ ọsọ bụ n'ozuzu 300 ~ 600RPM. Ọrụ igwe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ mgbe niile, ya bụ, ọ nwere ike iwepụta akara ngosi dị n'ime ọsọ ọsọ ya (n'ozuzu 2000RPM ma ọ bụ 3000RPM), yana nrụpụta ike na-aga n'ihu ọsọ ọsọ.
Nke anọ, bufee ikike dị iche
Stepper moto n'ozuzu adịghị nwere bufee ikike. Ọrụ servo moto nwere ike bufee ikike. Na-ewere usoro Sanyo AC dị ka ihe atụ, ọ nwere ikike nke ọsọ ọsọ na oke ibu. Ogologo kachasị dị okpukpu abụọ ma ọ bụ ugboro atọ nke akara ngosi akara ma nwee ike iji merie ikike inertial nke ibu ọrụ na mbido na mbido. Ebe ọ bụ na moto mgbatị ahụ enweghị ikike dị otú ahụ, iji merie oge a na-enweghị isi na nhọrọ, ọ na-adịkarị mkpa ịhọrọ moto ahụ na nnukwu torque, na igwe anaghị achọ nnukwu iyi ahụ n'oge ọrụ nkịtị, ya mere onu nke torque n'efu emee.
Nke ise, arụ ọrụ dị iche iche
The stepper moto na-achịkwa site na-emeghe-akaghị akara. Ọ bụrụ na ugboro mbido dị oke elu ma ọ bụ ibu ahụ buru oke ibu, ọ dị mfe ịzọpụ ụkwụ ma ọ bụ nkwụsị; ọ bụrụ na ọsọ ahụ dị oke elu, ọ dị mfe ịgafe mgbe ịkwụsị. Ya mere, iji hụ na njikwa ziri ezi, nsogbu nke ịrị elu ọsọ na ọdịda ọsọ kwesịrị ijikwa ya nke ọma. Ọrụ servo mbanye usoro mechiri emechi-akaghị akara. Onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ nwere ike ịlele akara ngosi nzaghachi nke encoder moto. Akụkụ dị n'ime nwere mgbanaka ọnọdụ na mgbanaka ọsọ.
Nke isii, arụmọrụ ọsọ ọsọ dị iche iche
Ọ na-ewe 200 ~ 400 milliseconds maka stepper moto iji mee ngwa ngwa site na izu ike ruo ọsọ ọsọ (n'ozuzu ya ọtụtụ narị narị ntụgharị na nkeji). Omume osooso nke sistemụ AC dị mma. Nara igwe na-arụ ọrụ NEWKYE 400W AC dị ka ihe atụ, ọ na-ewe millisecond ole na ole iji mee ngwa ngwa site na ezumike gaa ọsọ ọsọ nke 3000RPM, nke enwere ike iji ya na oge nchịkwa chọrọ mmalite na ịkwụsị ngwa ngwa.
Na mkpokọta, AC servo usoro dị elu karịa stepper moto n'ọtụtụ arụmọrụ. Otú ọ dị, a na-ejikarị stepper arụ ọrụ moto ahụ n'oge ụfọdụ na-adịghị achọsi ike. Ya mere, na usoro nhazi nke usoro nchịkwa iji tụlee ihe ndị chọrọ njikwa, ụgwọ na ihe ndị ọzọ, họrọ igwe njikwa kwesịrị ekwesị.
Ngwakọ Stepper Motor, 220 Volt Ọrụ Servo Motor, Servo Motor Actuator, 6 Waya Stepper Motor, Ọrụ Stepper Motor, Emechiela Loop Stepper Motor Driver,